မုတ်ဆိတ်များသည်လူတို့၏အဓိကဆွဲဆောင်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာလျှင်အလွန်အမင်းမြှောက်ပင့်နိုင်သည်။ သို့သော်တောက်ပသောမုတ်ဆိတ်မွေးကိုနေ့စဉ်ရရှိရန်လိုအပ်သည်။ Y မင်းရဲ့မုတ်ဆိတ်ကိုပုံဖော်ဖို့အရေးကြီးဆုံးလုပ်ငန်းတွေထဲကတစ်ခုက.
အမေဇုံ, € 7.99
သစ်သား (သို့) အခြားပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်စေ၊ မုတ်ဆိတ်ဖြီးသည်သင်၏မျက်နှာဆံပင်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏မုတ်ဆိတ်ကိုလိုချင်သောပုံသဏ္giveာန်ရှိစေရန် Balm မတိုင်မီအသုံးပြုပါ။ လောင်ကျွမ်းသောဖြစ်စဉ်သည်ဖြတ်ထုတ်ရန်လိုအပ်သည့်ကြိုးများကိုခွဲခြားသိမြင်ရန်နှင့်အရေပြားပေါ်တွင်အညီအမျှခွဲဝေရန်လိုအပ်သည်။ မုတ်ဆိတ်ကိုစာသင်ခန်းနဲ့အချိန်မရွေးတက်နိုင်အောင်သင်ယူနိုင်ပါတယ်။
Beardbrand, € 20.62
Tea Tree Utility Balm သည်စျေးကွက်ထဲတွင်ကျန်းမာရေးနှင့်အညီညွတ်ဆုံးမုတ်ဆိတ်မွေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ မျက်နှာသွင်ပြင်ဆံပင်များကိုသရက်သီး၊ လန်းနိုလင်၊ ဂျိုဗိုအဆီသို့မဟုတ်ကိုကိုးကဲ့သို့သောပါဝင်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည်။ ဤသည် balm သည်သင်၏မုတ်ဆိတ်ကိုအာဟာရဖြစ်စေခြင်းနှင့်ပုံသွင်းခြင်းအတွက်သာမကအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည် ၎င်းကိုခန္ဓာကိုယ်နှင့်လက်၏အရေပြားပေါ်တွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည် သူတို့ကျန်းမာရေးနှင့် elasticity ကိုထိန်းသိမ်းရန်။
ဗိုလ်ကြီး။ Fawcett ရဲ့
သင်၏မုတ်ဆိတ်ကိုယူရို ၁၀.၉၅ ယူပါ
နှုတ်ခမ်းတိုတိုသည်အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်ရှည်လျားသောနှုတ်ခမ်းမွှေးများဖြစ်လာသည့်အခါထုတ်ကုန်များကို၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါနှုတ်ခမ်းမွှေးဖယောင်းဗိုလ်ကြီး။ Fawcett's ကသင့်အား၎င်းကိုသာယာသော Lavender ရနံ့ပေးစဉ်၎င်းကိုသတ်မှတ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ အိတ်တစ်ချောင်းယူပြီးသင့်လက်မနှင့်လက်ညှိုးကြားတွင်နွေးပါ၊ အခုသင်ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောပုံသဏ္givingာန်ကိုပေးပြီးဖြီးလိုက်ပါ။ နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုကိုဖယ်ထုတ်ပြီးနှုတ်ခမ်းနှစ်ခုလုံးကိုဖယ်ထုတ်ဖို့စဉ်းစားပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု » သင့်ရဲ့မုတ်ဆိတ်ပုံဖော်ရန်အခြေခံလိုအပ်ချက်များ